साताको तस्वीर : बजार बढार्दै प्रहरी ! – ebaglung.com
२०७४ पुष १२, बुधबार १६:४५	Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र
बागलुङ २०७४ पुस १२ । त्यसो त, कुनै अवसर पारेर बेला बखत सरसफाई अभियान सन्चालन गर्ने परिपाटी बागलुङमा नभएको होईन । पर्व, महोत्सवका अवसरमा कहिले नेता प्रशासकको अगुवाई त कहिले संघसंस्थाहरुको अग्रशरतामा सरसफाईमुलुक कार्यक्रम गरिदै आएको पनि छ ।
बागलुङ जिल्लाको सदरमुकाममा आयोजना गर्न लागिएको बागलुङ महोत्सवको मुखैमा प्रहरीको सक्रियतामा बजार सरसफाई गरिएको छ । प्रहरीको यस सरसफाई कार्यक्रमले बागलुङ नगरवासीमा निश्चयपनि केहि सन्देश प्रवाह गरेको छ, जस्लाई नगरवासीले लाज नमानी ग्रहण गर्नु जरुरी छ, आफ्नो घर आगन अरुले कति दिन बढारिदिने ?
रातामाटाको पाखामा रहेको बागलुङ नगरपालिकाबाट छर्लंग देखिने बागलुङ बजारमा शान्ति सुरक्षामा समर्पित प्रहरीहरुले बन्दुकको ठाउँमा हातमा कुचो लिएर बजारको फोहोर बढार्दै हिँडेको दृश्य देखियो देखिएन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर प्रहरीको यस सत्कार्यलाई साधुवाद गर्दै अब सबैले आँखा उघारेर हेर्नुपर्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ ।
तस्वीर सौजन्य : पत्रकार बिजय राना, बागलुङ ।
धवलागिरी बहिरा आवासीय माबिका बिद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री एवं कपडा सहयोग